CUNTO KU HABOON EE LO'DA CAANAHA: TALOOYIN WAX KU OOL AH - XOOLAHA
Ka hor intaanay iibsanin lo'da caanaha, waa lagama maarmaan in la ogaado nooca cunnooyinka loo baahan yahay in la siiyo, sababtoo ah waxay ku xiran tahay cuntada, inta badan, qadarka caanaha lagu quudin karo hal xayawaan.
Nafaqada ayaa sidoo kale ka ciyaareysa door muhiim ah habka ilaalinta hawlaha taranka.
Inta dheer ee lo'da ku siinayaa weylaha, waxa ka sii fiican ayaa kuu noqon doona.
Sidaa daraadeed, waa inaad la xiriirtaa arrinka cuntada ee lo'da caanaha aad u daran.
Si loo go'aamiyo xaddiga ugu wanaagsan ee cuntada la siinayo lo'da caanaha, mid waa inuu ogaadaa sida xaddigan loo xisaabiyo.
Waxaa jira dhowr tilmaamood oo kuu sheegaya cuntada intee le'eg ayaa laga rabaa lo'daada.
Xoogga ugu weyni waa miisaanka lo'da, sidaas darteed, marka ay sii culus tahay, cuntada badan ayaa cuneysa.
Qiyaasta 100 kg ee miisaanka nool waa in la siiyaa qaybta 1 quudinta. Waxaa sidoo kale la tixgeliyaa tirooyinka caanaha la soo saaro maalin kasta, quudinta, da'da lo'da, miisaanka miisaanka lagama maarmaanka ah, iyo sidoo kale xaaladaha xayawaanka.
Sidaa darteed, 1 kg oo caano ah ayaa la soo saaraa waa in la siiyaa 0.5 qaybood oo cunto ah. Qofka yar yar ee Burenka ah, tamarta badan ee ay u baahan tahay, sidaas darteed 10% qiimo dheeraad ah ayaa saameyn doona jirka koraya.
Haddii aad horay u joogtey, taas oo ah, waa la nadiifiyey, lo'da, ka dibna waxay u baahan doontaa inay bixiso 1-2 qaybood oo cunto ah oo dheeraad ah si ay carafadu u hesho xoog.
Haddii aad rabto in aad laydhkaaga aad u hesho miisaan culus, ka dibna waxay u baahan tahay 0.5 qaybood oo ka badan inta caadiga ah ee tilmaamaya si loo gaaro miisaan korodh oo ah 1 kg.
Xaaladaha caanaha waxaa kale oo ay saameeyaan shuruudaha maqaarka, halkaasoo xayawaanka la hayo.
Sidaa darteed, haddii aysan suurtagal ahayn in si fiican loo hagaajiyo dibedda qolka, ka dibna lo'da waa in la siiyaa 10% quudin dheeraad ah.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee lo'da maaha inay cunaan. Haddii qadarka feedhku uu ka badan yahay awoodda caloosha, waxa uu ka dhigan yahay xanuunada mareenka caloosha iyo mindhicirka, taas oo, taasi waxay, keenaysaa in ay ka sii darto caafimaadka ee lo'da iyo hoos u dhaca mugga caanaha la siiyey.
Intee in la siiyaa quudinta si ay xayawaanku si khalad ah u dhaafaan?
Su'aashan ayaa laga jawaabi karaa iyadoo la go'aaminayo nadiifinta maaddada qallalan ee cuntada. Qiyaasta maalin kasta ee qalalan ayaa ah 2 - 3 kg halkii 100 kg oo ah miisaanka nool ee lo'da.
Haddii lo'da cuno yar oo quudin leh, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad kordhiso heerka 4 ilaa 4.5 kg.
Laakiin la'aanta cuntooyinka ugu badan ee suurtagal ah waxay u baahan yihiin in la buuxiyo, maaddaama isticmaalka caadiga ah ee lo'da uu noqon doono 8 ilaa 10 kg 100kg oo miisaankeedu yahay. Cunto quudin, xayawaanka waa in la siiyaa wax ka badan 1 - 2 kg.
Xagga sare, odhaahda "cutubka quudinta" ayaa u muuqday. Sida caadiga ah, cutubkani wuxuu u dhigmaa 80 - 120 garaam.
Jirka jirku wuxuu u baahan yahay in la siiyo labadaba carbohydrates culus oo culus, laakiin saamiga qaarkood. Tusaale ahaan, 1 unug cunto ayaa ka kooban 30 - 40 g oo dufan ah, 240 g oo ah fiber, 7 g oo cusbo, 86 - 108 g oo sonkor, 7 g oo ah kalsiyum iyo 5 g oo ah fosfooraska.
Saldhigga cuntada ee lo'da waa 3 nooc oo quudin ah:
Isku dheellitirta quudinta oo ah ilaha tamarta iyo borotiinka
Quudinta si loo hubiyo qiimaha nafaqada ee caanaha
Cunto quudin, oo loo yaqaanno aasaasiga, xayawaanka waa in la siiyaa xaddi aan xadidnayn laba jeer maalintii. Maxaa la cunay looma baahna.
Iyada oo alaabooyinkaas "rough" ah la siin karaa hay, caws, kabo, kabo. Dareerahan waxaa ku jira qadar fara badan, taas oo hoos u dhigta kiimikada caloosha, sidaa daraadeed waxaad u baahan tahay inaad siiso feedhooyinka ka hor intaanad doonaynin inaad ku quudiso xayawaanka adoo xoogga saaraya.
Laakiin zootechnists waxay ku talinayaan in aan laga saarin quudinta aan dhab ahayn ee feedhayaasha, sababtoo ah sida caadiga ah kala badhka raashinka maalin kasta ee lo'da waa inuu ka kooban yahay walxahaas.
Isku dheellitiridda cuntada dheeraadka ah ee la isku dhafay iyada oo la baabi'inayo yaraanta ama ka badan ee borotiinka ee dambe. Sidoo kale isu dheelli tirka cuntada waa in la siiyaa xayawaanka haddii aysan jirin wax vitamiin ah iyo nafaqooyin jirka ka mid ah.
Ilaa hadda, waxaa jira noocyo badan oo quudin oo abuuraya dheellitirka borotiinka jirka ee xayawaanka. Waa xarumahan kuwaas oo loo yaqaanno balansiga.
Haddii uu jiro borotiin aad u badan oo ku jira jidhka lo'da, gudaha iyada waxay ubaahantahay cunto (shaciir, sarreen, miro).
Haddii borotiinku, marka laga reebo, kuma filna, xayawaanku wuxuu u baahan yahay cunto (kufsi ama soy). Noocaan feedhku wuxuu ka qaybqaataa xaqiiqda ah in lo'da soo saarto inta ugu macquulsan ee caanaha.
Quudin wax ku ool ah waxay ka caawisaa kordhinta wax soo saarka caanaha, iyo sidoo kale si loo hagaajiyo caanaha marka la eego qiimaha nafaqada. Haddii aad xayawaanka ku hayso qoyaanka ugu weyn, waxay ku siin kartaa ugu badnaan 15 - 20 litir oo caano ah maalintii, xitaa haddii ay kuwan yihiin si fiican u dheellitiran.
Isku-dhafka waa caws isku dhafan oo caano leh oo bixiya waxsoosaarka caanaha ee ka sarreeya caadada. Hal cuno hal sac ayaa la siin karaa ugu badnaan 3 ilaa 4 kg oo ah diirad.
Doorashada ugu fiican waxay noqon laheyd sii dufanka xayawaanka ee qaybo yaryar 4 saacadood kasta inta lagu jiro maalinta.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo xoolaha naas nuujinta.
Markaad xisaabinayso cuntada, waa in aad marka hore xisaabisaa inta le'eg ay tahay in ay cunaan quudinta ugu weyn, intee in le'eg - balansiga, iyo ka dibba - tirada dufanka.
Qadarka qaybta nafaqada waa in loo tixgeliyaa si gooni ah lo'da kasta, oo ku salaysan calaamadaha soosaarka caanaha. Laba litir oo caano ah waa inay ahaataa 1 kg oo cunto ah.
Qiyaasta maalin kasta ee lo'da waa inay ku jiraan dhammaan 3 qaybood, iyadoo 50% ay tahay in loo qoondeeyo kaliya kalluunka. Qeybta labaad waxaa loo wareejiyaa diirada iyo quudinta borotiinka.
Lo'da waa in la siiyaa biyo, sababtoo ah haddii lo'da siinayso caano badan, ka dibna waxay cabbi doontaa wax badan. Qiyaasta ugu fiican ee biyaha iyo caanuhu waa 1: 3 litir.
Xilliga xagaaga, lo'du waxay badanaa ku quudiyaan cawska. Xilliga jiilaalka, dhammaan noocyada quudinta waa in la siiyaa qiyaastii isla egtahay.
Xitaa in arrinta ku saabsan quudinta caanaha loo baahan yahay iska dheelitirsidaa daraadeed xayawaanku waxay dareemayaan raaxo iyo mahadnaq ku ah qaab aad u badan oo caano cusub oo cusub.